प्रिया, मेरो लागि उपवास नबस ! - हिपत खबर
ishwor आइतवार, भदौ ३१, २०७५
तिमी मेरो आयुको लागि पानी नै नपिएर उपवास बस्ने
योजनामा छौ। तर त्यो तिम्रो गलत बुझाई हो। तिमीले उपवास बस्दैमा मेरो आयु लामो हुनेहोइन। आयुको भविश्य कसलाई थाहा छ र ? केही बढी वर्ष लम्ब्याउनका लागि त मैले नै नियमित स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ।